Taha-bola Taratry ny tanjaky ny toekarena
Samy manana ny taha-bola na ny “taux de change” mety aminy ny firenena tsirairay arakaraky ny zava-misy ao aminy. Miankina amin’ny toetoetran’ny toekarena any amin’ny firenena no hametrahana ny taha-bola mifandraika amin’izany.
Tetikasa Fihariana Mahatratra 50 486 ny dosie voaray
Miisa 50 486 ireo antontan-taratasy voaray eo anivon`ny Antenimieran`ny varotra manerana ny faritra 22 eto Madagasikara mahakasika ny fandaharanasa
Tantsaha eto Madagasikara Vitsy no afaka mindram-bola
Ambany ny tahan’ny tantsaha mahazo fahafahana mindram-bola sy manatona eny anivon’ireny ivontoerana manao fampindramam-bola ireny amin’izao.
Nilaza ny solontenan`ny OMS, Charlotte Faty Ndiaye fa mankasitraka ny fanaovana fanadihadiana ny tranga niseho teto Madagasikara farany teo. Nilaza ihany kosa izy fa hanamafy ny fiarovana amin`ny famindram-bola amin`ny maha mpiaramiombon’antoka azy ireo. Nohamafisiny koa ny fanohanana hatrany ny governemanta mahakasika ny ady amin`ny kolikoly. Etsy an-daniny, ny minisiteran`ny fahasalamana dia ho hentitra amin`ny fepetra horaisiny. Hisy ihany koa ny fiaraha-miasa amin`ny Fitsarana hisorohana ny fanodinkodinam-bola. Marihana fa efa maro ireo namelona lakolosy ny amin`ny tokony handraisana fepetra manoloana ny fihanaky ny valanaretina eto Madagasikara. Hisy zava-doza eto raha tahaka izany ny fitantanana isorohana ny valanaretina. Mitavozavoza ny fanjakana ary manjaka ny fanodinkodinam-bola sy ny kolikoly. Manjaka amin`ny sampandraharaham-panjakana hatrany ambony izany ary mitera-doza. Ahiana hampalailay fonosana ny mpamatsy vola ny tranga toy izao. Marihana hatrany fa tsenam-baro-panjakana tsy mazava mifandraika tamin’ny fividianana fitaovana fampangatsiahana tao amin’ny sampandraharaha mikasika ny resaka vaksiny na ny DPEV (Direction de Programmation Elargie de Vaccination) io raharaha fanodinkodinam-bola amin`ny vaksiny io. Tetikasa novatsian’ny GAVI na « Global Alliance for Vaccines and Immunization » vola.